မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၅ဝဝဝ ကျော်ကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၅-မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်တွင် ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေကျပ်သိန်း ၁၅ဝဝဝ ကျော်အား အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်မှုဖြင့် ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကိုအမှု ဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်ရှိ Elite Tech IT Service Co.,Ltd မှ ငွေ ခန်းတာဝန်ခံဖြစ်သူ မအိအိလွင် (စိစစ်ဆဲ) နှင့် ငွေကိုင်ဝန်ထမ်းမသန္တာ အောင် (စိစစ်ဆဲ) တို့ နှစ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေကျပ် ၇ဝ၄၂ ဒသမ ၅ သိန်းနှင့်သိန်း ၈၆ဝဝ တို့အား ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၇ ရက် နှင့် ၃ဝ ရက်များတွင် Bank ရှိ ကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းသို့ လွှဲပြောင်း ပေးသွင်းပြီးကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီဌာန အတွင်းအသုံးပြုသော ငွေစာရင်း ပြေစာမှတ်တမ်းများအား ၄င်းတို့ နှစ်ဦးမှ ပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုး ကာ ငွေအသွင်းပြထားသော်လည်း အဆိုပါနေ့ရက်များ၌ Bank ရှိ ကုမ္ပဏီဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ အမှန် တကယ်ငွေသွင်းထားခြင်းမရှိသည် ကို ကုမ္ပဏီစာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ စစ် ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် မအိအိလွင်နှင့်မသန္တာအောင်တို့ နှစ်ဦးမှ ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေ ကျပ် ၁၅၆၄၂ ဒသမ ၅ သိန်းအား ကိုယ်ကျိုးအ တွက် ရယူသုံးစွဲမှုအပေါ် ¤င်းတို့ တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ဝန်ခံလက် မှတ်ရေးထိုးပြီး ငွေများအားပြန် လည်ပေးလျော်ပါမည်ဟု ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူများ၏ ရှေ့မှောက် တွင် ပြောကြားခဲ့ပြီး လူမှုရေးအရ စောင့်ဆိုင်းခဲ့သော်လည်း ငွေပေး လျော်ရန် သတ်မှတ်နေ့ရက်တွင် ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ တိမ်းရှောင်နေကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ထုတ်ပြန် ချက်အရ သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီ မှ Assistant Director Of Sale & Operation ဝန်ထမ်းဖြစ်သူဦးမျိုး ဇော်အောင်မှ သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း သို့ ဇွန် ၄ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် သွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာ ရှိတစ်ဦးက ”ငွေကျပ်သိန်း ၁၅ဝဝဝ ကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးကိုအမှုဖွင့်တာဟုတ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ နှစ်ဦးကိုတော့ မမိသေးပါဘူး” ဟု ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ဇွန် ၅ ရက်ကပြောသည်။
ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်နယ်မြေရဲ စခန်းမှ (ပ)၉၄ဝ/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ် ကြီးပုဒ်မ-၄ဝ၈(စာရေးဝန်ထမ်းက ယုံကြည်အပ်နှံရေးဖောက်ဖျက်မှု) ဖြင့် မအိအိလွင်နှင့် မသန္တာအောင် တို့ကို အမှုဖွင့်ပြီး စုံစမ်းလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ပြည်သူများ ထိရောက်စွာ ခံစားရရှိစေရန် အနစ်နာခံ အားစိုက်ထုတ်သည့် တ??